सावधान ! लकडाउन उल्लंघन गरे ६ महिना कैद हुनसक्छ – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/सावधान ! लकडाउन उल्लंघन गरे ६ महिना कैद हुनसक्छ
सावधान ! लकडाउन उल्लंघन गरे ६ महिना कैद हुनसक्छ
336 1 minute read
चैत, काठमाडौं । नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी रोक्ने प्रयासमा एक साताका लागि देशलाई ‘लकडाउन’ गरेको छ । साथै देशभरका नेपालीहरुलाई चैत ११ गतेदेखि चैत १८ गतेसम्म बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म घरबाट बाहिर निस्कन रोक लगाइएको छ ।
काठमाडौंमा एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएलगत्तै सरकारले देशलाई लकडाउने गर्ने निर्णय गरेको हो । लकडाउन उल्लंघन गरेमा ६ महिनासम्म कैद र ६ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुन्छ ।
यो अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधि गर्न र त्यससँग सम्बन्धित गाडी चलाउनमात्र पाइन्छ । मानिसहरुलाई घर बाहिर निस्किन नदिने र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमात्र गर्न दिने निर्णय कतिपयलाई कर्फ्यू जस्तै लाग्न सक्छ । उस्तै उस्तै लागे पनि कर्फ्यू र लकडाउन फरक कुरा हुन् ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सुरक्षा चुनौती देखिएमा कर्फ्यू लगाउँछन् भने सुरक्षा बाहेकका अन्य कारणले मानिसहरुलाई आउ-जाउ गर्न नदिन लकडाउन गरिन्छ । लकडाउन संक्रामक रोग ऐन-२०२० अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ भने कर्फ्यू स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय गराएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले लगाउन सक्छ ।
लकडाउन कर्फ्यु जस्तो कडा हुँदैन । तर, लकडाउनको आदेश पालना नगर्नेहरुलाई ६ महिनासम्म कैद र ६ महिनासम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
लकडाउनको बेला पत्रकारहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पासको व्यवस्था मिलाइएको छ । स्वास्थ्य र सुरक्षाका सवारी साधन सञ्चालन हुन पाउँछन् । यसैगरी औषधि, तरकारी, खाद्यान्न, पानी, दूध, विद्युत, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन र फोहरमैला संकलनका क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई लकडाउनमा छुट छ । यस्तै औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, पानी, दूध र इन्धनसँग सम्बन्धित उद्योग तथा कलकारखाना सन्चालन हुन पाउँछन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउने गर्ने निर्णय सबैभन्दा पहिले चीनले गरेको थियो । हुबेई प्रान्तको वुहान शहरमा गत डिसेम्बर अन्तिम साता सबैभन्दा पहिले कोरोना संक्रमित बिरामी फेला परेपछि चीनले लकडाउन गरेको थियो ।
त्यतिबेला विश्वका अन्य देशहरुले घर बाहिर पनि निस्किन नदिएर चीन सरकारले तानाशाही शैली अपनाएको भन्दै विरोध गरेका थिए । तर, जब कोरोना संक्रमण विश्वभर फैलिन थाल्यो, तब सुरुमा चीनको विरोध गर्ने देशहरुले पनि आफ्नो देशमा लकडाउनको नीति लिए ।
अहिले चीन कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न सफल भइसकेको छ । तर, विश्वका १९४ देशहरुमा यसको संक्रमण फैलिइसकेको छ । कोरोना संक्रमणबाट १५ हजार बढीको ज्यान गइसकेको छ भने साढे ३ लाख बढी मानिसहरु संक्रमित भएका छन् । १ लाख भन्दा धेरै मानिसहरु उपचारपछि निको भएका छन् ।
अञ्जलि अधिकारी पुगिन भाईरल अर्जुन विकलाई साथ दिन , देखिए यसरि संगै कोठामा [भिडियो]
यिनै हुन् हिजो गुल्मीमा भएको जीप दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउने गुल्मीका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, जो सधैका लागि अस्ताए !
अब यस्ता व्यक्तिहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा जान रोक
‘भारतले बाटाे खनेको थाहै पाइनँ पत्रपत्रिका पढेपछि पो बल्ल थाहा भो, म त छक्क परेँ: प्रधानमन्त्री
खुसीको खबर:कोरोनाबाट १३ दिनमानै आमा गुमाएका शिशुमा कोरोना नेगेटिभ।